Radio NUG – Test Program – Aug 20th 2021 : NUG-CIT : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive – PVTV Myanmar
Radio NUG – Test Program – Aug 20th 2021 : NUG-CIT : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
·5months ago ·41 Comments
ဒီနေ့မနက်စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ည ၈ နာရီ ထပ်မံပြီး စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့် ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်ရပ်မှာရှိကြတဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဖမ်းယူရရှိမှုအခြေအနေကို Message Box ကနေတဆင့် ပြောပြပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
(ဤလင့်ခ်ကို နှီပ်ပြီး နားဆင်နိုင်ပါပြီ)
Radio NUG – Test Program – Aug 20th 2021
သတင်းများ၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ တင်ပြချက်၊ ခွန်အားမျှပေးစာကဏ္ဍ၊ နွေဦးအနုပညာ တင်ဆက်မှု၊ (ဆပ်ပြာပူဖောင်းလေးတွေလို၊ မြစ်မင်းသာ)၊ CDM တို့၏ အသံများကဏ္ဍ၊ PDF ဂုဏ်ပြု တေးသီချင်း တင်ဆက်မှု။
(ဩဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၂၁၊ မနက်နဲ့ ညနေ ၈ နာရီ အစီအစဉ်ဇယား)
Like – 7.1K Share – 1025
Radio NUG – Dec 6th, 2021, 2:30PM
Richard Michael William says:
2021-08-20 at 9:18 AM
ပြောသွားတာတွေလည်း မြေပြင်မှာ ဖြစ်နေတာတွေ အမှန်အကန်တွေပါ။
Htutkhaung Hkhaung says:
VOA ပဲ ပေါ်ပေါ်လာနေတယ်
2021-08-20 at 9:24 AM
Intro music is damn good.. Love it. And anchor voice is clear and smooth.. Really good.
KZ KZ says:
12bandနဲ့ကော ရလားဗျ သိရင်ပြောပေးပါအုန်း
လိႈင္ ထိပ္ထား says:
2021-08-20 at 9:30 AM
လွင့်တဲ့ နေရာနဲ့ ဝေးလို့ထင်တယ် လေသံတွေလိုပါနေတယ်
Wunna Htun says:
2021-08-20 at 9:47 AM
Digitalမဟုတ်လို့လားမသိ မနက်ကတော့ ဖမ်းလို့မရဘူး။
May Pyo says:
2021-08-20 at 9:49 AM
ဘယ်လိုဖမ်းရမှန်းမသိလို့ သင်ပေးကြပါအုံးနော် please.
တိုက္ဂါး ကင္း says:
2021-08-20 at 9:51 AM
Sit Paingg says:
2021-08-20 at 10:00 AM
မကွေးတိုင်း နားထောင်လို့ ရပါတယ်
ทุน จอ says:
2021-08-20 at 10:03 AM
SW 8 / MHz 17.63 မှအသံကောင်းလိုင်းရှင်း
Lin Taryar says:
2021-08-20 at 10:05 AM
ရရင် ဘာ်လိုလုပ်ရလဲ ပြောပြပေးကြပါလားဗျ
မနက်က ဘယ်လိုမှ မရလိုက်လို့ပါ
ဖုန်းထဲက Radio လိုင်းနဲ့ရော ရကြလားဗျ ဘယ်လိုဖမ်းလို့ရလဲ အလင်းပြကြပါအုံးဗျာ
Thondara Thondara says:
We support RADIO NUG.
2021-08-20 at 11:12 AM
အချင်းချင်း ဘာလေးကရတယ် ဖုန်းကတော့မရဖူး အဲ့လိုလေးတွေ မန့်ကြပါဗျာ နောက်လူတွေလဲရှာရလွယ်အောင်🙏🙏🙏
ဇော် မဲလုံး says:
2021-08-20 at 11:29 AM
ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ်မြို့ကပါ။ လိုင်းက သိပ်အဆင်မပြေသေးဘူး။ ရှဲရှဲ နဲ့ မကြားတချက်ကြားတချက်ပေါ့။ အရေးတော်ပုံအောင်တော့မည်
Teachel Lay says:
2021-08-20 at 11:31 AM
2021-08-20 at 11:35 AM
Wai Yan Linn says:
2021-08-20 at 12:26 PM
SW2ကိုထား။
メイ ジィン パイン says:
2021-08-20 at 12:28 PM
Nway Oo Nay says:
2021-08-20 at 1:20 PM
လိုင္းကေတာ့မိပါရဲ႕ အသံသိပ္မရွင္းဘူးဗ် တရွဲရွဲနဲ႔။
2021-08-20 at 1:29 PM
ဇဝနလမ္းမေတာ္ ဇဝနလမ္းမေတာ္ says:
2021-08-20 at 1:44 PM
2021-08-20 at 2:55 PM
ကို ကို ကြီး says:
Online ကနေနားထောင်ရတာတော့ ရှယ်ဘဲဗျို့ အစီအစဉ်တွေလည်း မိုက်တယ် ကြိုက်တယ်
Ag Thurein says:
2021-08-20 at 3:23 PM
ကျွန်တော့်အဖေ အူမကြီးကင်ဆာအဆင့်၃ ဝမ်းတွေအရမ်းသွားပီအစားမစားနိုင်တဲ့အပြင် ကင်ဆာဆေးမသွင်းနိုင်တာလည်း3လလောက်ရှိပီ။ဆေးဘဲဝယ်သောက်နေရတာ ဆေးတွေကလည်းအရမ်းဈေးတက်၊ ဝမ်းအိတ်စျေးကလည်းတက်။ အခုလည်း ကင်ဆာဆေးကိုမပျက်မကွက်ပြန်သွင်းရမယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးက ပြောလာလို့ ဆေးရုံတက်နေရတာ ၅ရက်ရှိပြီ။ ကျွန်တော်လည်း အဖေ့သောက်ဆေးစရိတ် ဝမ်းအိတ်စရိတ်တွေနဲ့တင် အရမ်းကျပ်တည်းလာလို့ အခုလိုရှက်ရှက်နဲ့ အကူညီတောင်းရတာပါ။
အဖေဆေးသွင်းဖို့အတွက် Adplatin 100 mg Inj – 90,000 ကျပ် ၊ Adplatin 50 mg Inj – 50,000 ကျပ် ၊ Leucovorin Inj 50 mg/5ml (၇ပုလင်းစာ) 57,750 ကျပ် ကုန်ကျမှာဖြစ်လို့ တတ်နိုင်သလောက်လေးကူညီလှူဒါန်းပေးကြပါဗျာ။ ကျွန်တော် အကူအညီတောင်းပါတယ်။ လှူဒါန်းပေးမယ့်အလှူရှင်တယောက်စီတိုင်းကိုလည်း ရှိခိုးကန်တော့ပါတယ် ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
aung thurein kyaw
Thar Htet Aung says:
2021-08-20 at 3:34 PM
2021-08-20 at 3:35 PM
ေဌး ဝင္း says:
2021-08-20 at 3:55 PM
ပခုက္ကူအနောက် ကမ္မ မြစ်ခြေ ကြားကရွာတွေမှာတော့ ဒီနေ့မနက် (၈:၀၀)နာရီအစီစဉ်နားဆင်ရလို့အသံကြည်လင်ပြတ်သားစွာရှိပါတယ်
Phan Thakhin says:
Tinlin Tinlin says:
2021-08-20 at 4:28 PM
ဆရာ ကျနော်3band Radio ဝယ်မိထားတာပါဗျ ရလားမသိဘူး ဆိုင်ပြန်လည်းတော့Radioတွေကမရှိတော့ဘူးတဲ့
Phyo Hlian Aung says:
2021-08-20 at 4:32 PM
2021-08-20 at 4:45 PM
U Naung Gyi says:
2021-08-20 at 5:15 PM
2021-08-20 at 5:46 PM
Mg Mg Paisoe says:
2021-08-20 at 7:59 PM
ည၈:၀၀ လွှင့်တဲ့အချိန်လေးကိုပြန်သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်။ ည၈:၀၀ဆိုသံပုံးတီးကြတဲ့ အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ပါ။
2021-08-20 at 8:23 PM
ည 8နာရီ sw 17.7 မှာ ခွေးတွေ ရဲ့ လေလှိုင်း သံပဲ ဖြစ်နေတယ် ကျွန်တော် တ၀်ယောက်တည်း လား။
Aung Naing Myint says:
2021-08-20 at 8:31 PM
Swe Ko Htet says:
ဘယ် box ကမှ ပြောခိုင်းမနေပါနဲ့တော့ဗျာ
၁၃၀၀၀ တန် လည်း ဝယ်နေကြပါပြီး ဗျာ
တချိန်က ခိုးနားထောင်ရတဲ့ ဘဝ ပြန်မရောက်ခင် အရေးတော်ပုံ ကို အောင်စိတ် ဖြင့် အောင်ဖို့ရန် ခြေတပ်ကြတာပေါ့ ဗျာ
2021-08-21 at 12:29 AM
U Myint Thwin says:
2021-08-21 at 10:22 AM
yutube or fb ကနားထောင်လို့ရချင်ပါတယ်
ကနီဖြစ်စဉ်မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က စစ်ရာဇဝတ်မှုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျူးလွန်ခဲ့တာ ဖ…